PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်ပေးသွင်းသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ကြေးနီချုံ့ထားသောတံတောင်ဆစ်ပြားအမျိုးသမီးတံတောင်ဆစ် - စက်ရုံဈေး - Sunplast
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PEX-AL-PEX ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း > PEX-AL-PEX Compression Fittings > PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်ကြေးနီ compression နံရံဖြင့်ထိုးထားသောတံတောင်ဆစ်
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်ကြေးနီ compression နံရံဖြင့်ထိုးထားသောတံတောင်ဆစ်
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်ကြေးနီချုံ့ထားသောတံတောင်ဆစ်တံတောင်ဆစ်၊ ရရှိနိုင်သည့်အရွယ်အစား - ၁၆ မီလီမီတာ၊ ၁၈ မီလီမီတာ၊ ၂၀ မီလီမီတာ၊ ၂၆ မီလီမီတာနှင့် ၃၂ မီလီမီတာ။ သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုလက္ကားစျေးနှုန်း၊ SUNPLAST မှကြေးနီချုံ့နံရံကပ်တံတောင်ဆစ်ပြားအမျိုးသမီးတံတောင်ဆစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်ကြေးနီ compressအိုင်းယွန်း နံရံဖြင့်ထိုးထားသောတံတောင်ဆစ်
PEX-AL-PEX ပိုက်အတွက်ကြေးဝါချုံ့ထားသောနံရံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတံတောင်ဆစ်ကို ၁၆ မီလီမီတာမှ ၃၂ မီလီမီတာအထိရရှိနိုင်ကာနီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မူရင်းသောကြေးဝါများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Brass Compressအိုင်းယွန်း တံတောင်ဆစ်အမျိုးသမီးတံတောင်ဆစ်
ZL16 × 1/2 "F ကို
ZL16 × 3/4 "F ကို
ZL20 × 1/2 "F ကို
ZL20 × 3/4 "F ကို
SUNPLAST multilayer pipe has been exporting to more than 15 countries & areas in worldwide, we have been buildingalong & good business relatအိုင်းယွန်းship with our customers. Thanks to the superior quality & best service, all customers are happy on us.
Sunplast သည် ၁၅ နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ယခုအခါတရုတ်နိုင်ငံရှိ PEX-AL-PEX multilayer pipe & fittings ၏ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူတစ် ဦး အဖြစ်လူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်စက်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ထံမှတရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးနှင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်အခမဲ့ပါ။
hot Tags:: PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်တရုတ်တံတားချုံ့ထားသောတံတောင်ဆစ်တံတောင်ဆစ်တံ၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ရုံ၊ စက်ရုံ၊
ကြေးဝါချုံ့ Wall-Plated အမျိုးသမီးတံတောင်ဆစ်PEX နံရံကပ်အလှဆင်အမျိုးသမီးတံတောင်ဆစ်PEX-AL-PEX နံရံကပ်အလှဆင်အမျိုးသမီးတံတောင်ဆစ်ကြေးဝါ Wall-Plated အမျိုးသမီးတံတောင်ဆစ်PEX-AL-PEX compression နံရံဖြင့်ထိုးထားသောတံတောင်ဆစ်ကြေးဝါချုံ့ Fittingsကြေးဝါဝက်အူ FittingsPEX-AL-PEX ပစ္စည်းကိရိယာPEX-AL-PEX Compression FittingsComposite ပိုက် Fittings
PEX-AL-Multilayer PEX ပိုက်အတွက်ကြေးဝါ compression Equal Tee
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက် Tee လျှော့ချသောကြေးဝါချုံ့ခြင်း
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက် Coupling Reducing Coupe လျှော့ချသောကြေးဝါ